News Collection: सदावहार सुन्दरी र फिट नायिका करिश्मा मानन्धरको फिटनेस रहस्य
सदावहार सुन्दरी र फिट नायिका करिश्मा मानन्धरको फिटनेस रहस्य
समयमा खाना खान्छु, प्रशस्त पानी पिउँछु, गाईको शुद्ध दूध पिउँछु, नियमित व्यायाम र योग गर्छु । जंक फुड कहिल्यै खान्नँ ।
हेनरी डेभिड थोरोले आफ्नो निबन्ध 'वाकिङ'मा लेखेका छन्- दिनमा कम्तीमा चार घन्टा सांसारिक व्यस्तताबाट छुट्कारा लिएर जंगल, डाँडा तथा खेतमा बरालिनँ भने म आफ्नो स्वास्थ्य र उत्साहको रक्षा गर्न सक्दिनँ　। हिँडाइले शारीरिक फाइदा दिन्छ र शारीरिक व्यायामको प्रमुख कुरा पनि हो- हिँडाइ　। खासमा हिँडाइ प्राविधिक कुरा हो, जसमा हिँड्ने मान्छेको शरीरको क्यालोरी, खुट्टा चलाइको गति, फड्काइको लम्बाइजस्ता अनेकौं कुरा ठ्याक्क मिल्नुपर्छ　। 'हिँड्नु राम्रो व्यायाम हो　। तर, यहाँ (काठमान्डूमा) हिँड्ने कहाँ ?' नेपाली फिल्मकी सदावहार सुन्दरी र फिट नायिका करिश्मा मानन्धरले प्रश्न गरिन्, 'अहिले त काठमान्डूका सडकमा अटाइनअटाई गाडी छन्　। मर्निङवाकमा गइरहँदा पछाडिबाट गाडीले ड्याम्म हान्यो भने ?'
एक/डेढ दसकअघिसम्म करिश्मा एकाबिहानै काठमान्डूकोे सडकमा निस्किन्थिन्, मर्निङवाकका लागि　। बढीजसो साइकलमा र कहिलेकाहीँ चाहिँ हिँड्दै　। साइकल चलाउँदा मुख छोप्थिन् रे　। तर, त्यस बस्तीवरपरका मान्छेलाई थाहा हुन्थ्यो, सधैं एकाबिहानै साइकलमा मुख छोपेर व्यायामका लागि निस्कने यी सुन्दरी नायिका करिश्मा हुन्　। उनी चिसो हावासँगै बग्दै कुनै हरियो चौरमा पुग्थिन् र जिउ तन्काउन हल्का एक्सरसाइज गर्थिन्　। अहिले ती दिनहरू एकादेशको कथा बनेका छन्, करिश्माका लागि　। किनभने उनले देख्दादेख्दै सुनसान लाग्ने काठमान्डूका फराकिला चौर र सडकहरू भरिए　। जुनै वेला पनि पीँ-पीँ गर्दै गाडी कुद्न थाले　। र, यहाँका सडकमा टहलिने, लम्किने र दौडिने निराश भए　। अहिले करिश्मासँग त्यो पुरानो साइकल पनि छैन र बोझिलो सडकमा पहिलेझैं हिँड्ने रहर पनि छैन　। पहिले सडकमा हिँड्ने धेरैजना अहिले घरको कुनै कोठामा थन्किएको ट्रेडमिलमा दगुर्न थाले, करिश्माजस्तै　। 'छेउबाट गाडी सुइँसुइँ दौडेका हुन्छन्, कसरी दौडनु ?' करिश्मा भन्छिन्　। उनी पहिलेजस्तो एकाबिहानै घरबाहिर सडकमा मर्निङवाक नगरे पनि घरकै ट्रेडमिलमा एक घन्टा दौडिन्छन्, सकैसम्म दैनिक नभए पनि सातामा चार दिनचाहिँ पक्का　। 'मलाई व्यायाम गर्न साह्रै मनपर्छ र गर्छु पनि,' उनले सुनाइन, 'अहिलेचाहिँ बत्ती आएको वेला मौका छोपेर मात्रै ट्रेडमिल प्रयोग गर्छु, तौल घटाउने हिसाबले होइन शरीरलाई फिट राख्नका लागि　।'
२५ वर्षअघि १४ वर्षको उमेरमा सन्तान फिल्मबाट मायानगरीमा आएर लगातार छाएकी यी नायिका अमेरिका भासिएपछि भने नेपालमा रहँदाजस्तो एक्सरसाइज गर्ने समय पाइनन् रे　। 'मेरो अमेरिका बसाइको सबैभन्दा नराम्रो कुरा के भने, म कहिल्यै एक्सरसाइज गर्न पाउँदिनथेँ,' करिश्माले भनिन्, 'नियमित एक्सरसाइज गर्न नपाउँदा केही कुराको कमी महसुस हुन्थ्यो, सधैं　। त्यसैले गाडीमा यात्रा गरिरहँदा वा कतै पार्कमा उभिँदा पनि अनुलोम-विलोम गरिरहेको हुन्थें　।' आफू अहिलेसम्म फिट देखिनुको ठूलो रहस्य 'एक्सरसाइज' हो भन्छिन्　।
अहिले हरेक बिहान आठ बजे ओछ्यानबाट ब्युँझेपछि उनी बेडमै चिया पिउँछिन्　। आफ्नो नित्यकर्म सिध्याएर बाहिर चौरमा आउँछिन् र एक हजारपटक स्किपिङ (डोरी खेल्ने) गर्छिन्　। त्यसपछि २ दशमलव ५ केजीको डमबेल उचाल्छिन् केही समय अनि ट्रेडमिलमा एक्सरसाइज गर्छिन् आधा-एक घन्टा　। तर, यी प्राविधिक व्यायामभन्दा बढी समय योगा गर्छिन्　। 'सामान्य आसन गर्छु योगामा　। शवासन बढी समय गर्छु　। अनुलोम-विलोम पनि गर्छु, केहीबेर,' उनले भनिन्　।
करिश्मा निकै समय सुत्छिन् रे　। दिउँसो खाना खाएपछि केही घन्टा सुत्छु,' उनले भनिन्, 'बेलुका आठ बजे सुतेँ भने बिहान पनि आठै बजे मात्र उठ्छु　।' उनको विचारमा, धेरै सुत्नु पनि शरीरका लागि निकै फाइदा छ　। 'मान्छेले सबैभन्दा राम्रो आराम सुतेको वेला पाउँछ　। झन् त्यसवेला उसका शरीरका थकित मांसपेशीले शान्ति पाउँछन्,' करिश्मा भन्छिन्, 'मान्छे सुन्दर देखिनुमा ऊ कति घन्टा आराम गर्छ, त्यसले पनि असर गर्छ　।'
करिश्माको व्यायाम गर्ने समय बढीजसो बिहान र साँझ हो　। 'साँझ र बिहानको समयले मनलाई शान्त बनाउँछ र छुट्टै प्रकारको विचारको उदय गराउँछ, त्यसैले एकान्तमा गरिने शारीरिक अभ्यासका लागि त्यो समय निकै उपयुक्त छ,' उनले भनिन्　।
'योग गर्नूस्, शारीरिक र मानसिक व्यायाम गर्नूस्,' उनी आफ्नो उमेरभन्दा जवान देखिनुका कारण यही हो भन्छिन्　। उनलाई थाहा छ, शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थताका लागि योग र शारीरिक अभ्यास निकै जरुरी छ　। 'शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि सबैभन्दा सही माध्यम नै शारीरिक व्यायाम हो,' उनले भनिन्　। उनी वेला-वेला हेल्थक्लब पनि जान्छिन्　। अनि याक एन्ड यती होटलमा पनि पुग्छिन् वेला-वेला सौना बाथ र स्टिमका लागि　। 'मसाज पार्लरचाहिँ गएको छैन,' उनले भनिन्　।
कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू व्यायाम नगरी योगा मात्र गर्छिन् उनी　। 'कहिलेकाहीँ सुटिङतिर दौडनुपर्छ　। एकदमै 'बिजी' हुनुपरेकाले व्यायाम गर्नै भ्याउँदिनँ,' उनी सुनाउँछिन्　। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बिन्धित यस्ता अभ्यासले करिश्मालाई आफ्नो व्यक्तित्वमै फरक पारेको महसुस हुन्छ रे　। घर र अफिस एकैपटक धान्नुपर्ने अन्य कामकाजी महिलालाई झैं उनलाई पनि समय व्यवस्थापनको तनाब हुन्छ फिल्ममा अभिनय गरिरहेका समय　। 'बढी व्यस्त भएको वेला के गर्ने, कसो गर्ने सोच्नै सक्दिनँ,' उनी भन्छिन्　।
'जीवनको सन्तुलनका लागि योग निकै जरुरी भएको छ,' उनले भनिन्, 'मान्छेलाई प|mेस, खुसी र सन्तुष्ट हुन सिकाउँछ योगले　।' उनले योग गर्न सिकेकोचाहिँ टेलिभिजनमा हेरेर र किताब पढेर हो　। 'टेलिभिजनमा रामदेवको योग हेर्छु र त्यस्तै गर्ने प्रयास गर्छु　। व्यायामसम्बन्धी किताब पनि पढ्छु,' उनले भनिन्　।
समयमा खानपिन पनि मान्छे तन्दुरुस्ती देखिनुको मूल कारण हो भन्छिन् करिश्मा　। 'ठिक्क र नियमित समयमा खानुपर्‍यो　। म बिहान नौ बजे ब्रेकफास्ट खान्छु र दिउँसोतिर खाना　। चिया दिनको एक कप मात्र लिन्छु,, ब्ल्याक टी' उनले भनिन्　। उनी प्रशस्त पानी पिउँछिन्　। गाईको शुद्ध दूध पिउँछिन् रे　। खानाचाहिँ केही पनि बार्दिनन्　। 'सबैखाले खाना खान्छु,' उनले भनिन्, 'गुलियो, चिल्लो, अमिलो, पिरो सबैखाले खान्छु　। बरु कार्बोहाइड्रेड कम भएको खाना ठीक लाग्छ　। जंक फुडचाहिँ कहिल्यै खान्न　।' उनी एकछाक दाल-भात र अर्को छाक रोटी-मासु खान्छिन् रे　। कहिलेकाहीँ बियर र वाइन पनि पिउने गरेको उनले बताइन्　।
फिल्म खेल्दाका सुरुवाती दिनमा करिश्मालाई 'डाइटिङ' मात्र गरे पनि शरीरलाई फिट राख्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो रे　। 'मान्छेको कम्मर पातलो भयो भने त्यो फिट शरीर हो भन्ने सोच्थें त्यसवेला,' उनले भनिन्, 'तर, अहिलेका हिरोइन त सब फिट छन्　। आफूलाई कसरी तन्दुरुस्त राख्ने उनीहरू जान्दछन्　।' उनलाई पुरानी नायिका तृप्ति नाड्करले आफूलाई फिट राखेको ठान्छिन्　। उनलाई हिरोहरूमा हेन्डसम र फिट लाग्ने राजेश हमाल हो　। 'राजेशजी आफ्नो उमेरको जत्ति देखिनुहुन्न, जवान देखिनुहुन्छ,' उनले भनिन्　।
'वसन्ती' फिल्मको सुटिङका लागि करिश्मालाई आफ्नो जिउ घटाउनुपर्ने भयो　। ४५ केजीकी महिला देखिनुपर्ने थियो　। त्यसका लागि उनले खुबै मिहिनेत गर्नुपर्‍यो　। 'त्यसको सुटिङका लागि सात महिनासम्म चिल्लो, कार्बोहाइड्रेड भएको खाना र मासु खाइनँ,' उनले भनिन्, 'मैले मेरो जिउ ठ्याक्कै ४५ केजीको बनाएको थिएँ　।' फिल्मका हिरो-हिरोइनले सधैं आफूलाई सुन्दर र फिट राख्नुपर्ने उनको तर्क छ　।
सधैंको शारीरिक व्यायाम, योग र ध्यानले मानिसलाई सुन्दर बनाउँछ भन्छिन् करिश्मा　। 'सौन्दर्य आत्मविश्वास हो　। शारीरिक व्यायामले मान्छेलाई सुन्दर र फिट देखिन मद्दत गर्छ　। मानिस सबै सुन्दर हुन्छन्　। आफ्नो सौन्दर्य कसरी निखार्ने भन्ने कुरा आफैंमा निर्भर गर्छ　। छालाको स्याहार र मेकअपले पनि मान्छेलाई सुन्दर देखाउन मद्दत गर्छ,' उनी सुनाउँछिन्　।
'दिनहुँ आफूलाई केही न केही काममा अल्झाइरहनुपर्छ　। स्वस्थ जीवनको रहस्य यही हो　। मान्छेले आफूलाई जति बूढो ठान्दै गयो, शरीरले त्यहीअनुसार प्रतिक्रिया जनाउँछ　।'
उनलाई 'एक इन्च मात्रै हाइट बढी भइदिएको भए अझ राम्री हुन्थें कि ?' भन्ने लागेको रहेछ　। उनी वेला-वेला सोच्छिन् रे- यो संसारमा ऐना नभइदिएको भए मान्छे कति दुःखी हुन्थे होलान् ? उनी पटक-पटक ऐना हेर्छिन् र मख्ख पर्छिन्, आफ्नो रूप देखेर　। 'संसारमा ऐनाजत्तिको सुन्दर कुरा केही छैन,' उनले भनिन्, 'मेरो वरिपरि सधैं ऐना भइरहन्छ　। मेरो ब्यागमा पनि सधैं हुन्छ ऐना　। दिनको चार/पाँचपटक ऐना हेर्छु, यसले मेरो आत्मविश्वास बढाउँछ　।'